Ungavumeli Izibalo Zikukhohlise - Ukukhuthazwa Kwamagciwane Kusebenza | Martech Zone
Ungavumeli Izibalo Zikukhohlise - Ukukhuthazwa Kwamagciwane Kuyasebenza
NgoLwesine, Agasti 25, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Ufundile kule bhulogi ukuthi ukumaketha oku-inthanethi kungumdlalo womfutho. Ngenkathi imigqa ivame ukufana uma kukhulunywa ngokusebenza kanzima namasu azinikele, kusekhona ukubuya okuhle kumasu wokukhuthaza igciwane. Ukuba nengcezu yokuqukethwe kubhulogi yakho noma kusayithi kufinyelela kubantu abaningi akwenzi nje umonakalo bese uyanyamalala, uzothola ukuthi iphesenti lalowo mgwaqo lifanele futhi lizokwenza Ukunamathela nxazonke.
Isibonelo, sine- I-infographic emakhasini okufika suka kuStumbleUpon cishe inyanga edlule - ungabona i-spike engezansi. Umthelela olandelayo ezibalweni zizonke uyaqagela - amanani anciphayo yanda, ukuzibandakanya wehlile, namakhasi ngokuhambela ngakunye wehlile kakhulu ngesikhathi spike.
Kodwa-ke, lokho abathengisi abaningi abangaqapheli ukuthi umthelela wokukhuthazwa kwegciwane onjengalo ukukunikeza igxathu elibalulekile ekuhambeleni okulandelayo, okufanelekile ngemuva komcimbi. Ngikumake lokho kufayela le- Ama-Analytics ishadi elingezansi. Ulayini omnyama iwindi lamanje lezinyanga ezi-3 futhi ulayini ompunga okhanyayo iwindi langaphambilini lezinyanga ezi-3 elibekwe njengesiqhathaniso.
Qaphela ukwanda okuphelele kwetrafikhi wahlala.
Lokhu kuyisihluthulelo! Abakhangisi abaningi bayathanda ukubona ukukhula okuhamba kancane, okunesimo (ngiyakwenza) futhi angicabangi ukuthi lawa ma-spikes kuthrafikhi enza noma yini ngaphandle kokubanga ikhanda. Kodwa-ke, abanye abathengisi bakuqonda ngokuphelele ukuthi ukushaya ithoni lezivakashi ngomcimbi onegciwane ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi, noma ukukhushulwa okukhulu, noma ukubalulwa kusayithi elikhudlwana kakhulu kuzothumela i-spike ethrafikhi - kepha eziningi zalezo zivakashi izohlala. Kulokhu, kufinyelelwe nge-infographic emnandi engiyithumele ku-StumbleUpon.
Uma uqhubeka nokuphromotha okuqukethwe okuhle okukhiqiza izipikha ezinjengalezi, ungaba namazinga amabi kakhulu, ukubukwa kwamakhasi nokuzibandakanya - kepha usazoqhubeka growing izilaleli zakho eziyizimpande. Izethameli zezimpande is umshado! Izibalo zimane zisitshekelwe yinqwaba yezivakashi ezingafanele.
Ukwanda kwenani lezivakashi ezifanele kuyisiza sakho. Ungavumeli izibalo zikuvimbe!
Ikusasa le-Interactive 360 ​​Degree Video
Abesifazane bavela eRIM, Abesilisa bavela kwaGoogle
Aug 25, 2011 ngo-4: 48 PM
Okuthunyelwe okuhle, uDoug. Siqaphele izinto ezifanayo ngokuqukethwe ngegciwane ku-Slingshot SEO. Kuyafana nangezingcezu zethu ezinkulu zemidiya.